Andian’olona nikomy, nanapaka lalana, nitoraka fiara: nipoaka ny lakrimozena teny Anosibe tsena | NewsMada
Par Taratra sur 18/01/2020
Efa nampoizina. Nisy ireo andian’olona nikomy, tsy nankasitraka ny fanalàna ireo mpivarotra amoron-dalana ka nanao sakana, nitoraka sy nanimba fiaran’olon-tsotra teny Anosibe, omaly. Nandray fepetra, nanaparitaka azy ireo tamin’ny grenady lakrimozena ny mpitandro filaminana.
Taorian’ny teny Anosy, Mahamasina, Andrefan’Ambohijanahary, ny alakamisy teo, nitohy teny Anosibe, omaly zoma maraina ny fanentanana ny mpivarotra tsy hivarotra amoron-dalana nataon’ny polisin’ny Kaomisarian’ny boriborintany fahadimy (CSP5). Nandeha araka ny tokony ho izy ny fandaminana, nanaraka ny toromarika daholo ny mpivarotra, niala, nesorina ny tranoheva sy ny latabatra tsy ara-dalàna. Toraka izany koa ny mpandeha an-tongotra amin’ny fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Saingy, nivadika ny raharaha, nanomboka tamin’ny 6 ora hariva. Nikomy ireo mpivarotra amoron-dalana, nitabataba, nametraka sakana toy ny latabatra, garaba, nandoro kodiarana teny amin’ny arabe, ary nisy mihitsy ny nitoraka fiara nandalo. Fiara iray no vaky fitaratra. Tsy maintsy nandray fepetra ny mpitandro filaminana, ary voatery notapahina ny lalana mankeny Anosibe, nisorohana ny fiara na zavatra simba, ny olona maratra, sns. Nanapoaka baomba mandatsa-dranomaso avy eo, nanaparitahana ireo olona.
Araka ny efa notaterina teto matetika, anisan’ny hamerenana ny hasin’Antananarivo Renivohitra ny fandaminana ataon’ny mpitandro filaminana izao. Natomboka teny Analakely, Tsaralalàna, Anosy, ary izao eny Anosibe izao. Nambaran’ny ao amin’ny polisim-pirenena fa hitohy ary tsy hijanona intsony izao hetsika izao. Nankasitraka izao ezaky ny mpitandro filaminana izao daholo ny mponina, maro ireo naneho hevitra tanaty tambajotra sosialy. Raha aravona, niray feo ny rehetra fa ireo zatra gaboraraka no minia tsy manaiky izao fandaminana izao.
Raha jerena tokoa ny etsy amin’ny tsenan’Andravoahangy sy ny Petite Vitesse, maro be ny latabatra tsy misy mpivarotra ao anaty tsena. Mirongatra mivoaka any amin’ny arabe daholo ireo mpivarotra. Manaiky tsara ny fandaminana anefa ny mpivarotra ao anatin’ny tsenan’ny Pochard Soarano, na dia ao anaty fefy aza.
Taorian’izao hetsika nataon’ny polisim-pirenena izao, tsikaritra fa tena nihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana teny Anosy, Anosibe, Andrefan’Ambohijanahary, sns. Andrasana ny hafa toy ny etsy Behoririka, Andravoahangy, Mahazo, Isotry, 67 ha, sns.